Idea Can Do by popolay.com
The "Idea Can Do" commentary seires for promoting Myanmar SMEs airs every Monday morning on Channel7television as part of the Good Monrning Myanmar news talk program, which runs Monday-Friday, at 7:00-8:00am.
24 มิ.ย. 2563 | 24,083 Views
10 Dec 2017 | 23,990 views ဆားကို သံလွင်ဆီနဲ့ ဆတူရောစပ်ပြီး Bath Scrub အဖြစ်သုံးလို့ ရပါတယ်။
02 Dec 2017 | 23,731 views ကြှနျမတို့ နစေ့ဉျနတေို့ငျး စားသုံးနတေဲ့ အရာတှတေိုငျးမှာ မပါမဖွဈပါနတေဲ့ “ဆား” က မီးဖိုခြောငျတဈခုတညျးမှာပဲ အသုံးဝငျတာမြိုးမဟုတျဘဲ သနျ့ရှငျးရေး၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ အလှအပ ရေးရာတှမှောလညျး အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။
02 Nov 2017 | 23,846 views ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သေသပ်လွယ်ကူလျင်မြန်နည်းလမ်းများ
25 Oct 2017 | 1,283 views အိမ်မှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဒီ5minute crafts လေးကို ကြည့်ပြီး အသုံးဝင်အောင်ပြန်လုပ်မယ်...
19 Jun 2017 | 2,280 views ကြမ်းပိုးဟာ အင်းဆက်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပိုးကောင်မွှားကောင် တစ်မျိုးဖြစ်ကာ နှိပ်နင်းရခက်ပြီး လူကိုဒုက္ခအပေးဆုံး ပိုးကောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးတွေရဲ့ ပင်မအစာကတော့ လူရဲ့ သွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးလေးတွေကို ဗလတောင့်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
22 May 2017 | 2,440 views လူတွေလိုပဲ ခွေးတွေဟာလဲ လေ့ကျင့်ပေးရင် ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ခွေးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်...
တာယာဟောင်းသုံးပြီး ထိုင်လို့လဲရ ပစ္စည်းလဲသိမ်းလို့ရတဲ့ ခုံ လုပ်မယ်
12 May 2017 | 2,254 views လုပ်ရတာတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အစုံရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့။ အဲဒီပစ္စည်းတွေ အတိအကျ မရှိတောင်မှ အနီးစပ်ဆုံး ဥာဏ်ရှိသလို တီထွင်ကြံဆ လုပ်နိုင်ပါတယ် ...
သင်သိရင် ပျော်ရွှင်သွားမယ့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးဝင်သော နည်းလမ်း(၂၀)
03 Jan 2017 | 1,432 views ဒါတွေကို သင်သိရင် ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မည်..
ချစ်သူတွေ အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေတဲ့ Lover Shape ဆိုင်
22 Jan 2016 | 1,393 views ဒီ Valentines Day မှာ ကိုယ့်ချစ်သူ အတွက် အထူးအဆန်းလေး ဖြစ်အောင် Lover Shape ဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးကြည့်လို့ရတယ်နော်။
အွန်လိုင်းကနေ မွေးနေ့ ကိတ်မျိုးစုံ လက်ခံ လုပ်ပေး နေတဲ့ Panda Diaries ဘယ်လို စတင်ခဲ့သလဲ
22 Jan 2016 | 1,621 views အွန်လိုင်း Facebook ကနေ တဆင့် မွေးနေ့ကိတ်များ နှင့် အခြား ကိတ်များ လက်ခံပြုလုပ်ပေးနေသော စီးပွားရေးလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီ အစားအစာ နှင့် Bakery ဆိုင်ကို ဒီလို စိတ်ကူးမျိုးဖြင့် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက် ခဲ့ပုံ
22 Jan 2016 | 1,306 views အီတလီ အစားအစာ နှင့် မုန့်များ ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်လေးဖြစ် ပါတယ်။ ဆိုင်လေးရဲ့ အတွင်းပိုင်းတွင် သူများနဲ့ မတူတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုပုံစံ အိမ်မှာ စားရသလိုမျိုး ခံစားရအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။